KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Al Shabaab oo la wareegeen Dhuusamreeb
Tuesday 20 March 2012 08:09
Al Shabaab oo la wareegeen Dhuusamreeb
Muqdisho (Keydmedia) - Maleeshiyaadka Kooxda Shabaab / Al Qaacida ayaa la wareegay Saakay Degmada Dhuusamreeb ee Gobolka galgaduud.
Wararka ka imaanaya Degmada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in saakay ay la wareegeen maleeshiyaadka qaacidadada Soomaaliya halkaas oo ay markii hore ka tallin jireen Ciidamada ASWJ, kadib dagaal xooggan oo qasaare geystay oo ku dhexmaray shabab iyo Sunna waljamaaca.
illaa iyo haatan lama oga qasaaraha dhabta ah ee ka dhashay dagaalka ay shabab kula wareegeen dhuusamareeb.
Dadka Deegaanka ayaa ku waabariistay saakay iyadoo ay magaallada gacanta ku hayaan Alshabaab lagana saaray ASWJ.
Inkastoo dadkuna ay si aad ah uga careysayihiin soo gelitaanka Shabaab ee Dhuusamareeb ayaa hadana waxaa Kooxda Shabaab looga bartay inay cadaadiyaan dadka ku nool meelaha ay xoogga ku haystaan.
Alshebabab ayaa horay loogala wareegay dhowr fariisin oo ay ku lahaayeen qaar kamid ah Gobollada dalka iyadoo arintaaninan ay u muuqata welwel soo foodsaaray dadka ku nool dhuuusamareen sida ay xaqiijiyeen dad muddo dheer deganaa Dhuusamareeb.
Qaar kamid ah Culumaa’udiinka Soomaaliyeed ee sida weyn looga yaqaanno Magaalada dhuusamareeb iyo dadweyne farabadan ayaa isaga barakacay Magaaladaasi kadib markii ay arkeen in ay magaalada qabsadeen koox aan diinta shaqo ku laheyn islamarkaasna dileysa cid kasta oo ay u arkaan inay afkaartooda kasoo horjeeddo.
Keydmedia.net - Xafiiska Muqdisho